प्रचण्डले किन लगाएनन् दशैंको टिका ? – Agrimpost
मुख्य पृष्ठराजनीतिप्रचण्डले किन लगाएनन् दशैंको टिका ?
२२ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासभित्र यसपालि दशैंको रौनक फर्केको छ । अघिल्लो वर्ष छोरा प्रकाश दाहालको निधनका कारण उनीहरुले टिका लगाएका थिएनन् । यसपाली दशैंको टिका लगाउन प्रचण्डका छोरीहरु रेणु दाहाल र गंगा दाहाल आफ्ना सन्तानहरुसहित खुमलटार आएका थिए । प्रचण्डको उपस्थितिमा उनीहरुलाई आमा सीता दाहालले टिका र जमरा लगाइदिइन् ।
आफ्ना चार सन्तानमध्ये दुईजना प्रचण्ड दम्पत्तिले गुमाइसकेका छन् । जेठी छोरी ज्ञानु केसीको स्तन क्यान्सरका कारण २०७० सालमा निधन भएको थियो । एक मात्र छोरा प्रकाश दाहालको दुई वर्षअघि मृत्यू भएपछि उनीहरुको सहाराका रुपमा दुई छोरी र नातिनातिनाहरु छन्
जनयुद्धमा गएदेखि प्रचण्ड र तत्कालिन माओवादी नेताहरुले घोषितरुपमा दशैं बहिष्कार गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि लामो समयसम्म प्रचण्डले टिका लगाएनन् । २० वर्षपछि २०७४ सालमा प्रचण्डको निधारमा विजयादशमीको टिका परेको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई पनि टिका र जमरा लगाइदिएका थिए ।प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले सामाजिक सञ्जालमा टिकाटालोका तस्वीरहरु सेयर गरेपछि निकै क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो ।